Ojiji nke gel Flekosteel na-ebelata ihe mgbu azụ, otu esi eji ngwá ọrụ dịka ntuziaka ahụ si dị
Ntuziaka maka ojiji Flekosteel
Ntuziaka maka jel Flekosteel
Ndị ọrịa na-ata ahụhụ site na nkwonkwo mgbu ruo ọtụtụ afọ agbalịwo ọtụtụ ọgwụ iri na abụọ ma ha enwebeghị ike imeziwanye. A kwadoro nke a site na ọtụtụ nyocha na forums ebe ndị mmadụ na-eme mkpesa banyere ọgwụ na-esote.
Flekosteel ude ezubere ọ bụghị naanị iji kpochapụ mmetụta na-egbu mgbu na ahụ erughị ala, kamakwa n'ịlụso ihe kpatara nsogbu ahụ ọgụ. Ngosipụta maka iji mee ihe karịsịa na-akwado iji ọgwụ ahụ eme ihe maka ndị ọrịa na-arịa ọrịa nke usoro musculoskeletal, ndị na-eme egwuregwu na ndị agadi.
Otu esi eji ngwaahịa
Iji nweta nsonaazụ dị mma, ịkwesịrị iji nlezianya gụọ ntuziaka maka ojiji, nke a na-emegharị na ebe nrụọrụ weebụ nke onye nrụpụta. Akwụkwọ ntuziaka ahụ ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi eji ọgwụ ahụ eme ihe. Nkeji nke itinye ude:
Nke mbụ, ịkwesịrị iji mmiri ọkụ na-ekpochapụ ebe ahụ emetụtara nke ọma.
Mgbe ahụ ịkwesịrị ihichapụ akpụkpọ ahụ.
Mgbe ahụ, ị kwesịrị ị na-ete obere ude n'ime akpụkpọ ahụ site na iji mmegharị ịhịa aka n'ahụ ruo mgbe nkwekọ ahụ na-abanye kpamkpam n'ime epithelium.
A ghaghị ịga n'ihu ịhịa aka n'ahụ maka nkeji ise.
Enwere ike ịsacha gel ahụ megide nkwonkwo na mgbu azụ naanị mgbe otu awa gasịrị site na ngwa ngwa. A na-atụ aro ka ịmeghachi usoro ahụ ugboro 2-3 n'ụbọchị, dabere na mgbaàmà ahụ. Ọzọkwa, enwere ike iji gel mee otu oge mgbe ọ na-abịa n'ịkwado maka asọmpi, ọzụzụ ma ọ bụ ahụ ike na-atụrụ ndụ mgbe ọ gasịrị.
Ọ dị mfe nke iji gel megide nkwonkwo na mgbu azụ bụ n'ihi nkwakọ ngwaahịa ya dị mma. Ude dị na tubes ruo 50 ml. Oriri nke ọgwụ ahụ bụ nke akụ na ụba, na ego zuru oke maka otu ọnwa nke iji kwa ụbọchị - usoro ọgwụgwọ. Ịbanye n'ime, ihe mejupụtara Flekosteel:
akwa na-ekpo ọkụ;
zuru ike mọzụlụ mechiri emechi;
wepụ ihe mgbu;
Ị nwere ike itinye gel n'akụkụ ọ bụla nke ahụ. Ihe mejupụtara eke adịghị akpata mmetụta dị n'akụkụ, ọ dị mma maka iji ụlọ mee ihe. Flekosteel bụ ọgwụ maka ndị na-achọ iweghachi mmegharị nkwonkwo. Ọgwụ enweghị contraindications.
Ị nwere ike ịzụta gel Flekosteel na Nigeria na webụsaịtị onye nrụpụta. Anyị na-enye ọnụ ahịa dị ọnụ ala ma na-ekwe nkwa ịdị mma nke ngwaahịa.